Amashishini ama-5 aguqulwe ngokugqibeleleyo yi-Intanethi | Martech Zone
Ubuchule buza ngendleko. U-Uber uchaphazela kakubi ishishini leeteksi. Unomathotholo we-Intanethi uchaphazela usasazo nomculo kwimithombo yeendaba zemveli. Ividiyo efunekayo ichaphazela iifilimu zesiko. Kodwa le nto siyibonayo ayisiyo tshintshelo yemfuno, yiyo ibango elitsha.
Ndihlala ndixelela abantu ukuba okwenzekayo ayisiyiyo enye imboni ebulala enye, kungenxa yokuba amashishini emveli ayekhuselekile kwimida yenzuzo kwaye azibulala kancinci. Yifowuni kuyo nayiphi na inkampani yemveli ekufuneka ityale itekhnoloji entsha ukuba inethemba lokuba ayizukuqhutywa ekugqibeleni.
Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, inguquko kwi-Intanethi itshabalalise iindlela zemveli zokusebenza kodwa ikwenzile nemizi-mveliso iphela ngamathuba amaninzi okuba nezinto ezintsha.
InkampaniDebt yenze le infographic, Guqula okanye Ufe: Amashishini ama-5 aTshintshe ngokuKhulu yi-Intanethi, ebonelela ngesishwankathelo somculo, ishishini lokuthengisa, ishishini lokupapasha, ishishini lokuhamba kunye nomzi mveliso wezothutho.
tags: ma shishiniutshintsho kwi-intanethiumculoPublishingIvenkileyothuthohamba